Ringing in the Ears နားအူခြင်း – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 March 24, 20190Minutes
မော်လမြိုင်၊ ၂၄ မတ် ၂၀၁၉
၁။ အသက်၃၂ အမျိုးသမီး။ နားအူတာ ၆ရက်ရှိပြီ။ ထိခိုက်မိတာမရှိ။ နားကို နား ကြပ်တံ နဲ့ ထိုးပြီး ကလိတာမျိုးလည်း မရှိ။ မပျို့ မအန်ဘူးဆရာ။ ခေါင်းလည်းမမူးပါ ဆရာ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ဘယ်လိုကုသပြီး ပျောက်ကင်းနိုင်မလဲဆိုတာ သိပါရစေဆရာ။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မ အသက် 28 ထဲမှာပါ။ ကျွန်မအလုပ်က Quantity Surveyor ပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ စာရင်းဇယား လုပ်ရပါတယ်။ နားအူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင်ပါတယ်။ ပြီးခဲတဲ့တပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ခေါင်းလျှော်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့ (13.10.2014) မနက် အိပ်ရာထတော့ နားနဲနဲအူပါတယ်။ အင်္ဂါနေ့လဲ နဲနဲအူပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မနက်ခေါင်းလျှော်မိပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်း ရုံးမှာခေါင်းမူးလာလို့ နားအူတာလဲ မသက်သာတာနဲ့ ဆေးခန်းပြပြီး အိမ်ပြန်နားပါတယ်။ ဆေးပေးလိုက်ပါတယ် (Dhaperazine Prochlorperazine Maleate 5mg/Tab, Gitako Tabs, Vit C (250MG) ဆိုပြီး ဆေး ၃ မျိူးပေးပါတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေး သောက်ပြီး အဲဒီနေ့ ညဘက်မှာ ကောင်းသွားပါတယ်။ ကြာသပတေး၊ သောကြာ နှစ်ရက်သက်သာပါတယ် နားလဲမအူပါဘူး။ စနေမနက် ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးသောက် အနားယူတော့ စနေည ဘက် ပြန်ကောင်းပါတယ် တနင်္ဂနွေလဲ ကောင်းပါတယ်။ ယနေ့ တနင်္လာနေ့ (20.10.2014) မနက်ပြန်ပြီး နားအူပါတယ်။ နားအူတဲ့အခါ လူက နှုံး ချိချိ ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ တခါတခါ ခေါင်းပါမူးလာတယ်။ ဆရာရှင့် အဲလိုဖြစ်တာ နားကတခုတခုဖြစ်နေတာလား။ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြော ကြောင့်ဖြစ်တာလား။ သွေးအားနည်းလို့ဖြစ်တာလား (သွေးပေါင်ချိန်ကတော့ 120/80 လို့ဆရာဝန်ပြောပါတယ်)။ စိုးရိမ်ရပါသလား။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ။
၃။ I am 35 years old man and getting MDR TB treatment since June 2013 and onwards. I also have diabetes. I have now severe hearing loss and tinnitus all the time that disturb my daily life. Hopefully MDR treatment dose will be completed in Feb 2015. My question is my hearing level can be better or normal and Tinnitus can disappear.
၄။ ဆရာရှင့် နားထဲမှာ Air-corn စက်လည်သံ၊ ပုရစ်အော်သံလိုမည်နေပါသည်။ အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပါ။ ဘေးမှ အသံများ ရှိပါက မသိသာပါ။ တိတ်ဆိပ် နေလျင်တိုးတိုးလေးကြားနေရပါသည်။ ခေါင်းမမူးပါ။ ခေါင်းမကိုက်ပါ။ မျက်နှာ နဲနဲတင်းပါသည်။ ဇက် ကျီးပေါင်းရှိပါသည်။ ၂ ပါတ်ခန့်ရှိပါပြီ။ ရိုးရိုးဆရာဝန်ကတော့ အားနဲခြင်းကြောင့်ဟု ပြောပါသည်။ ဆရာရဲ့ Opinion ကိုလေးစားစွာ တောင်းခံအပ်ပါသည်။
တခြားအကြောင်းတရားတွေလဲ ရှိသေးတယ်။ Earwax နားဖါတွေများနေတာ၊ (အက်စပရင်) နဲ့ ပဋိဇီဝဆေးတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ အရက်သောက်များတာနဲ့ (ကေဖင်း) ပါအရည်သောက်များတာ၊ နာပိုးဝင်တာ၊ နာစည်ပေါက်တာ၊ သွားနဲ့ ခံတွင်းရောဂါ၊ နားနဲ့ခေါင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်မတူတာနှစ်မျိုးမှာ ရုတ်တရက် ပြောင်းနေတာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျလွန်းတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာများတာ၊ သွေးတိုးနဲ့ သွေးကြောရောဂါ၊ အာရုံကြောရောဂါ၊ ဥပမာ multiple sclerosis နဲ့ migraine headache ရောဂါ၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ Acoustic neuroma ရောဂါ၊ Labyrinthitis ရောဂါ၊ Otosclerosis ရောဂါ၊ လည်ပင်းကြီးရောဂါ။ အများအားဖြင့် အလိုလိုပျောက်ပါတယ်။ ပြန်လဲဖြစ်တယ်။ မပျောက်နိုင်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
(ဆရာကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Mawlamyine Daily မှဖော်ပြပါသည်။)